प्रिमिएर लिगको पहिलो हप्तामा यस्तो देखियो यी खेलाडीको खेल!! कसको खेल प्रभाबकारी ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रिमिएर लिगको पहिलो हप्तामा यस्तो देखियो यी खेलाडीको खेल!! कसको खेल प्रभाबकारी ?
प्रिमिएर लिग-२०१८, फुटबलको बादशाह मान्दै आइरहेको इंग्लिश प्रिमिएर लिगमा तिब्र खेल गति र खेलाडीको उच्च खेलशक्ति देख्न सकिन्छ। यसै समरका निम्ति इन्ग्लिश प्रिमिएरका निम्ति बिहिबारको अन्तिम घडीसम्म ११० खेलाडीको स्थान्तरणको प्रकरण जारी रहयो र अधिकाम्ष खेलाडीले आफ्नो सुरुवात खेल खेलीसकेका छन् र केहिको आज हुदै छ। हालसम्म भएको सुरुवाती ७ खेलमा यी निम्न खेलाडीको खेल छाप देखिएको थियो।
किपा एरिज़ाबालगा- चेल्सी :
गोल रक्षक स्थान्तरणको इतिहासमा चर्को मूल्यमा चेल्सी भित्रिएका यी खेलाडी किपा जसलाई चेल्सी फुटबल क्लबले ७१ मिलियन खर्चिएको थियो। पूर्व गोल रक्षक थियाबुत कोर्तुवाको रियलको यात्रा पश्चात किपाले पहिलो खेल ११ अगस्तमा गरे जसमा उनको रेटिंग १० मा ६ रहेको छ।
हद्दर्सफिल्ड विरुद्धको खेलमा उनको पास अकुरेसी ६५.८ प्रतिशत रहेको थियो। २५ बर्षे यी खेलाडीको चेल्सीको निम्ति धेरै केहि गर्नू बाकी भएको र चेल्सीको निम्ति आझै कम्जोर देखिएको चेल्सीका म्यनाजर सार्री बताउछन।
डेबू खेलमा एबर्टन बिरुद्ध वोल्फ्समा रिचार्लिसनले २ गोल गरेका थिए, एक खेलाडी गुमाउदै १० जनामा समेटिदै २-२ को खेल पदर्शन गरेको एबर्टनका निम्ति दुवै गोल रिचार्लिसनले गरेका थिए।
३५ मिलियनमा वाटफोर्डबाट एबर्टन आएका रिचार्लिसनको रेटिंग १० मा ८ रहेको छ र क्लबका निम्ति निकै राम्रो खेल पदर्शन गरेकोमा हर्ष व्यक्त गर्दै उनका बोस सिल्बाले – “उनि मेरो पिता जस्तै देखिन्छन्”, भनेका छन।
नपालीबाट चेल्सी आएका जोर्गीनोको खेलमा निकै पप्रसंशानिय रहेको पाईएको छ। पहिलो खेलमा नै पेनाल्टीको अवसरमा गोल गर्दै टिमलाइ २-० को अग्रता दिदै, खेलमा उत्कृस्ट पास्सिंग रेट रहेको जोर्गीन्होको पास अकुरेसी ९३.९% रहेको थियो।
मौरिजियो सार्रीको नया खेल फर्मेसनमा यी खेलाडी निकै जमेको पाहिन्छ।
सिटीको खेलमा फर्किए डी ब्रुइने !! कारबो कपमा सिटी सेमिफाइनल प्रवेश
रोनाल्डोलाई पछि पार्दै लिओन मेस्सीले जिते पाँचौं गोल्डेन बुट !!
२८ बर्ष यता कै खराब पदर्शनले युनाइटेडका मौरिन्हो बर्खास्त